Mourinho Oo Dhulka Ku Jiiday Real: "Ka Harista Champions League Iyaga Ayaan Kasoo Bartay" %
Tababaraha kooxda kubada cagta Manchester United ee Jose Mourinho, ayaa wuxuu daafacay go’aankii kooxdiisa ay uga hartay Champions League, markaasoo ay soo dar-dartay naadiga reer Spain, ee Sevilla xili Old Trafford lagu dhar-baaxay.
Red Devils ayaa hada waxay kaliya haystaa ama ay xooga saareysaa tartanka FA Cup-ka, oo ay ka joogaan wareega Sideed dhamaadka, maadaama horyaalka uu yahay mid umuuqday inay ku guuleysan karto Manchester City.
Kooxda Mourinho ayaa waxay hada kaga jirtaa shaxda kala horeynta ee Premier League, kaalinta labaad waxayna ka dambeysaa Sky Blues, oo koowaad Jiifta 16 dhibcood, waana dhibcooyin keenay in loosii saadiliyo City hanashada EPL-ka.
“Inaan ka harno Champions League, waa mid aan noo niyad jabineysa, laakiin waxaad ogtihiin in kubada cagtu ay tahay dhaxal,” ayuu Mourinho ku calaan-calay isagoo fadhiya shirka jaraa’id ee ka horeeya ciyaarta Brighton, ee FA Cup-ka ka tirsan.
“Aniga caan kuma ahayn arrintaan, laakiin waxaan dhax-lay sanadkii 2011-kii [markii uu joogay Real Madrid] marka waxay ka dhgan tahay inaan soo dhax-lay,” ayuu hadalkiisa kusii daray, hogaamiyaha kooxda reer England.
Ugu dambeyn, Mourinho oo fariin udiraya jamaahiirta Manchester United ayaa wuxuu yiri: “Taageerayaasha, waa kuwa muhiim u ah mar-walba guusha ay kooxda gaareyso, waxaana rajeynayaa inaan qaladkeena dib usixi doono sida ugu dhow.
FA CupMan United vs BrightonMourinhoReal